dayniile » Warar Dheeraad ah oo ka so baxaya Hoobiyaasha lagu Weeraray Magalada Muqdishu.
Warar Dheeraad ah oo ka so baxaya Hoobiyaasha lagu Weeraray Magalada Muqdishu.
Wararka aan heleyno ayaa ah in Caawa Fiidki Magalaada Muqdishu lagu garaacaya Hoobiyo waxayna ku kala dhacayaan degmooyinka Werdhiigley iyo Xamar weyne iyo Boondheere iyo Howlwadaag.
Jugta qaraxyo xooggan ayaa caawa laga maqlayaa qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho, kuwaasoo u muuqda inay yihiin wax u eg madaafiic hoobiyeyaal soo dhacaya, iyadoo aan si rasmi ah loo ogeyn goobaha ay ku dhacayaan.
Dadka ku nool degmooyinka Warta Nabada, Xamar Weyne, Hodan iyo H/wadaag ayaa soo sheegaya inay maqlayaan madaafiic soo dhaceysa.
Jugta xooggan ee la maqlayo ayaa illaa iyo hada la ogeyn goobaha ay ku dhacayaan, xaaladana aad ayay u adag tahay.
Goor sii horeysay inta aysan bilaaban jugta u eg madaafiicda is xigay ayaa waxaa la malqay weeraro bam gacmeed ah oo lagu qaaday fariisimo ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka.
Qaraxyada xooggan ee caawa laga maqlayo magaalada Muqdisho ayaa imaanaya, iyadoo habeenkii koowaad ay tahay bisha Ramadaan.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqday inay diyaarisay ciidamo suga ammaanka, inta lagu guda jiro bisha Ramadaan.
Lama huba ilaa iyo haatan khasaraha ka dhashtay Hoobiyaashan waxaana la ogyahy in maanta maglaada muqidishu aad loo adkeeyey ayaa waxaa Caawa magalaada muqdishu qayba ka mid ah lagu tuuray banbo gacmeydyo.
Hadaba Maxaa keeni kara mar hadii ay Ciidmada Xasilinta iyo Kuwa Booliska ay taagaan yihiin wadooyinka ayagoo Jagboontiyo badan u yaalan Magalada banankeyda hase ahaate waxaa la yaab ah Ciidan Tiradiisa badan tahay hadane amniga magaalada qal qal ku jiro.